Ra’iisal-wasaaraha cusub ee Soomaaliya oo Baarlamaanka ka Codsaday inay Kalsoonida siiyaan | Aftahan News
Ra’iisal-wasaaraha cusub ee Soomaaliya oo Baarlamaanka ka Codsaday inay Kalsoonida siiyaan
Muqdisho(aftahannews):- Ra’iisal-wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo markii ugu horreysay warbaahinta dowladda tan iyo markii la magacaabay, ayaa Mudanayaasha Baarlamaanka Federaalka ka codsaday in ay siiyaan codka kalsoonida.
“Waxaan doonayaa in aan codka kalsoonida waydiisto Golaha Shacabka, aniga oo rajaynaya in ay isiin doonaan codka kalsoonida, si aan u guto waajibaadkayga” ayuu yidhi Raysal-wasaare Rooble.
Maxamed Xuseen Rooble, ayaa sheegay inuu si masuuliyadeed leh u aqbalay kalsoonida iyo magaabidda uu ka helay madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Ra’iisal-wasaaraha oo hadalkiisa sii watay, waxa uu yidhi; “Waxaa farxad ii ah in aan idinla wadaago, in aan si sharaf iyo dareen masuuliyadeed leh aan u aqbalay kalsoonida uu isiiyey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iiguna magacaabay Xilka Ra’iisul Wasaaranimo ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.”
Wuxuu Raysal-wasaaruhu xalay la kulmay gudoonka barlamaanka Soomaaliya, isagoo soo dhowayn ka helay.
Ra’iisal-wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo qodobbadaas ka hadlaya, waxaannu hadalkiisa idiinku soo gudbinaynaa muuqaalkan hoose ee daawasho wacan:-
Ra’iisal-wasaaraha cusub ee Soomaaliya oo haddii uu codka kalsoonida ka helo Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, noqonaya Wasiirka koowaad ee Xukuumadda Soomaaliya, ayaa haysta muddo kooban, waxaa horyaalla ugu horayn inuu si degdeg ah kusoo magacaabo xukuumad fulisa heshiiska doorashada.